Sodaney Mpitsoa-ponenana, Voafonja Tao Isiraely Noho Ny Fananany Bisikleta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2017 12:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, Italiano, English
Fanamarihana: nivoaka tamin'ny Jolay 2013 ity lahatsoratra ity
Ny 18 jolay, Babaker (Babi) Ibrahim, mpanao hatsikana iray mpangataka fialokalofana, teratanin'i Darfour, no voasambotry ny mpitandro ny filaminana isaeliana noho ny tsy fananany faktiora mikasika ny bisikletany, noho izany dia heverina ho halatra ilay izy.
Babi, endrika iray fantatry ny vondrom-piarahamonina sodaney ao Isiraely, dia anisan'ny iray tarika tamin'ireo mpitsoa-ponenana izay vao avy nanao fampisehoana manesoeso, One Strong Black (Mainty Iray Matanjaka), mikasika ny tsy fahaizana mitondra ireo mpitsoa-ponenana ao Isiraely. Ny fisamborana sy ny famonjana tsy nisy fitsaràna an'i Babi mandritry fotoana tsy voafetra dia nitarika hatezerana sy fanentanana iray, tao anatiny sy ivelan'ny serasera, mba hanafahana azy sy ireo mpitsoa-ponenana hafa mitovy aminy.
Napetraky ny ministeran'ny atitany isiraeliana tamin'ny volana septambra 2012, ny fitsipika vaovao iray [ang] manome alalàna ny fisamborana sy ny famonjana tsy manam-petra tsy misy fitsaràna ireo mpangataka fialokalofana ahiahiana ho nanao heloka bevava, na tsy dia marim-pototra aza ireo ahiahy ireo sady tsy mbola tonga hatrany amin'ny fanamelohan'ny tribonaly. Ny volana jolay 2013, ny lahatsoratra, Zotra momba ny fitondrana ireo nasisika [fomba filazan'ny fanjakana Isiraely an'ireo mpangataka fialokalofana] voarohirohy aminà, raharaha ady heloka, no nitarina mba hampiharina amin'ireo mpitsoa-ponenana ahiahiana na dia fandikàn-dalàna madinidinika aza no iahiahiana azy ireo. Mpangataka fialokalofana maherin'ny 500 no voatazona mba hampiharana ny didy mikasika ny heloka bevava ary nalefa tany amin'ireo toby fitazonana ireo mpitsoa-ponenana [angl] any amin'ny tanihay ao Négev, eo ampiandrasana ny fahafahana mandroaka azy ireo hiala ao Israely.
Ny 20 jolay, olona ampolony no nanao fihetsiketsehana nanoloana ny lapan'ny Lehiben'ny Fampanoavana, Yehuda Weinstein, izay nanome ny fanekeny an'io didy io:
Ny Hotline ho an'ireo mpiasa mpifindra monina, fikambanana iray miaro ny zon'ireo mpitsoa-ponenana, ireo mpifindra monina sy ireo niharan'ny fanondranana olona an-tsokosoko ao Israely, no nanome vaovao iray mikasika toerana misy an'i Babiny ankehitriny amin'ny lafiny ara-pitsaràna [hebreo] :
Taorian'ny nandavàn'ny Fitsarana Faratampony ny fangatahanay habeas corpus, nampiditra fampakarana fitsaràna vaovao ho an'i Babi indray izahay omaly… Mangataka ny fanafahana an'i Babi sy ny fanafoanana ireo fitsipika izay nahatonga azy ho voafonja ilay fampakarana fitsaràna nataonay, noho ny antony hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana ilay fepetra… Hotohizanay ny hiady ho an'ny fanafahana an'i Babi sy ny fanafahana ireo mpitsoa-ponenana voafonja rehetra tsy nasiana fitsaràna ao Isiraely. Tsy azo ekena ny fisian'ireo rafi-pitsaràna roa samihafa ao Isiraely: ny iray ho an'ireo mpitsoa-ponenana ary ny iray ho an'ny rehetra. Manafintohina ny fahitàna ireo mpitsoa-ponenana alefa any am-ponja higadra mandra-maty tsy misy porofo, tsy misy fitsaràna araka ny tokony ho izy, tsy afaka miaro tena ary tsy misy ilàn'ny mpitandro ny filaminana ny fanaporofoana hoe voaheloka tamin'itsy sy iroa izy ireo. Fitsipika iray mifototra amina petra-kevitra hoe ny fananana rehetra hita eny amin'olona iray hafa volon-koditra dia tsy misy afa-tsy halatra ary tsy tokony ho hita ao anaty firenena iray demokratika.
Nanoratra lahatsoratra iray teo amin'ny blaogin'izy ireo Laissez Passer, ireo mpiaro ny zo: Yonatan Berman sy Oded Feller, mikasika ny maha-kidaladàla ny fanagadrana ireo olona noho ny fananany
Manokatra ampahany iray fanaovana lalao tandrimo ho an'ireo mpamaky azy ny blaogi[nay]: vinanio ny fepetra manaraka [ataon'ny governemanta]. Araka ny hevitray: ireo mpitsoa-ponenana rehetra tsy afaka mampiseho ny faktiora nividianany ireo fitafiany eny an-damosiny dia ho fonjaina avokoa. Ho ataonay tsara antoka ihany koa fa hitanjaka ireo mpitsoa-ponenana rehetra. Na angamba, raha ny marina, ho fonjaina noho ny halatra avokoa ireo mpitsoa-ponenana rehetra, sy ireo mitanjaka, noho ny fihanjahana tsy misy henatra imasom-bahoaka.
Ilay blaogera ankavia malaza, Yossi Gurvitz, nanoratra teo amin'ny blaoginy Friends of George fa:
Manakaiky ny 160 taona taorian'ny [didy] Dred Scott v. Sandford, manakaiky ny 150 taona taorian'ny fanitsiana faha-13 izay namarana ny fanandevozana [tao Etazonia], neken'i Weinstein tamin'ny fanaovany sonia fa karazana olona iray manontolo – mazava ho azy, mainty ny fihodiran'izy ireo – no, raha tsy fananana ara-natiora, dia ambany noho ny olona. Ireo fanamafisana feno fanaratsiana ireo (ohatra, ny an'ny mpanambaka vahoaka voafidy izay tsy te-handoa ny karaman'izy ireo [ireo mpitsoa-ponenana rahonan'ireo mpampiasa azy ireo – fanamarihan'ny mpanoratra] dia ampy handefasana any anaty lavaky ny fitsaràna izay hita fa tsy ho afahany velively. Manam-bintana betsaka i Ibrahim: olona fanta-daza izy. Maro ny namany. Anjatony tamin'izy ireo no tafavoaka nony sabotsy alina iray nafana nihetsiketsehana ho azy nanoloana ny tranon'i Weinstein. Tsy nanam-bintana ny ankamaroan'ireo mpitsoa-ponenana. Tsy misy olona nahalala azy ireo, tsy nisy olona niady ny hampiditra fitsaràna habeas corpus ho azy ireo. Levona tanaty fahanginana izy ireo ary nanjavona tao anaty lavaka izay efa nolavahan'i Weinstein ho azy ireo. Tsy nampihontsona ny hevitry ny israeliana ilay fanapahankevitr'i Weinstein, izay azo oharina amin'ny didy Dred Scott ; maro ireo kambana amin'i William Yancey [solombavam-bahoaka demokraty avy any atsimo, mpiaro malaza ny fanandevozana] ary vitsy no sahy miteny hoe “manao tsinontsinona anay ianareo. Tsy ho ataonay izany!” [fanoherana nataona demokraty Tavaratra iray tamin'ny fangatahan'i Yancey hoe ny drafitry ny antoko demokraty nampiantsi ny fifidianana tamin'ny taona 1860 dia ahitana ireo fanambaràna fanandevozana].
Tsy tara tamin'ny fahazoana ‘tia’ an-jatony maro ny pejy Facebook freeBabi raha vantany vao natomboka. Nangatahan'ny pejy ireo mpamaky mba handefa ireo sary sy ireo lahatsarin'izy ireo mangataka ny famoahana an'i Babi. Marobe ireo azo sary, anisan'izany ireo mpanoratra sy ireo mpanao mozika tena fanta-daza.
Nandefa ny sariny ilay mpihira-mpamoronkira malaza, Alma Zohar, miaraka amina filazàna manao hoe: “Avoahy Babi! Sandaiko izaho zy ianao lafo ny fitazonana amponja olona tsy manan-tsiny!”
Nitsidika an'i Babi tao an-tranomaizina ao Giv'on ireo mpamokatra sy mpandrindra an-tsehatra ny tantara One Strong Black, tamin'ny 23 jolay ary nilaza taminy ny fanentanana fangatahana fampiakarana fitsaràna mba hanafahana azy. Voatondro ho ny 24 jolay no hanaovana ny famindrana an'i Babi ao amin'ny toby fanibohana ao Sahaornim.
Nanana akony ihany koa tany Torkia, Tonizia ary Gresy ilay fanentanana… Naka ity sary ahitàna azy ireo ity ihany koa i Simge sy Vulkan avy any Izmir, ao Tiorkia.
Namorona sary manàla azy iray avy tamin'ny sarin'i Weinstein, lehiben'ny fampanoavana i John Brown :
“Tsy manaiky isak'izay mihetsika ny fampidirana am-ponja mandra-maty ireo olona tsy manantsiny aho. Saingy rehefa manao izany aho, dia olona mainty mandrakariva ry zareo”